Mahajanga: Trano lehibe iray kilan’ny afo
mercredi, 13 septembre 2017 13:57
Ankohonana maromaro no indray traboina vokatry ny haintrano eny amin'ny Fokontany Tsararano ambany, secteur A. Trano iray lehibe no may kila ny maraina teo tamin'ny 09 ora tany ho any.
Tsy fantatra mazava ny nahatonga ny afo satria tsy nisy olona tao an-trano. Tsy nisy azo noraisina ny 90%n'ny entana tao amin'ilay trano.
Fahavoazana tsy roa aman-tany ny mahazo ireo ankohonana may trano satria ankoatra ireo entana hafa, may tao avokoa hatramin'ny fitaovam-pianaran'ny ankizy vao novidiana hiatrehana ny taom-pianarana vaovao.
Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina namono ny afo izay saika nihitatra tamin'ny trano manodidina.
[url=https://foursquare.com/user/469965345/list/cialis-and-also-its-impact-on-millions]how much does cialis cost[/url]
mardi, 12 décembre 2017 04:38
[url=http://edpharmacybest.com/]cialis, canadian pharmacy[/url]
jeudi, 07 décembre 2017 09:52
no priscription generic viagra canadian online pharmacy online pharmacies canada Viagra 100 mg best price fast viagra delivery canada pharmacy canadian health pfizer viagra 100mg price brand viagra online healthy man viagra radio
online viagra prescription canadian pharmacy viagra orlistat sky pharmacy generic viagra lowest prices brand viagra overnight delivery on line pharmacy canadian health online generic viagra sample pack canadian pharmacy brand viagra healthy man
jeudi, 07 décembre 2017 03:51
should i get rental car insurance auto insurance jacksonville fl
[url=http://autocarins2018.com/car-insurance-fresno/]how to start an auto insurance company[/url]
mercredi, 06 décembre 2017 16:19
mercredi, 06 décembre 2017 05:40
mardi, 05 décembre 2017 14:56
mardi, 05 décembre 2017 06:53
lundi, 04 décembre 2017 21:15